उडिरहेको चराहरु अचानक भुईमा बजारीएर मरे वैज्ञानिकहरु नै चकित - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार उडिरहेको चराहरु अचानक भुईमा बजारीएर मरे वैज्ञानिकहरु नै चकित
उडिरहेको चराहरु अचानक भुईमा बजारीएर मरे वैज्ञानिकहरु नै चकित
काठमाडौं । आकासमा उडिरहेका चराहरु अचानक जमिनमा खसेको दृष्य वास्तवमै अनौठो थियो । जमिनमा वजारिएर संसार छोड्दै गरेका चराहरुको संख्या पनि उदेकलाग्दो थियो । उडिरहेका चराहरु एक्कासी भुईमा बजारिँदै मर्दै गरेका दृश्य देखेका मानिसहरुले त्यो भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् ।
त्यस्ता दृष्य यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल हुन थालेका छन् । ति दृश्यहरु अमेरिकाको फिलाडेल्फियाका हुन् । गएको २ अक्टोबरमा फिलाडेल्फिस शहरमा १ हजार ५०० चराहरु आकाशबाट भटाभट खसेको समाचारमा जनाइएको छ । आकाशबाट तल खसेका चराहरु मध्ये धेरैको मृत्यु भएको अन्तरष्ट्रिय समाचारमा उल्लेख छ ।
Previous articleमिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाले एक महिनाभित्र उत्पादन शुरु गर्ने
Next articleमाधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रचण्ड–नेपाल समूहको निर्णय
नेपालसँग एकता नहुने ओलीको ठहर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, को को बन्दैछन् मन्त्री ?
अनुहारमा अनावश्यक रौँ छ ? सुन्तलाको बोक्राले यसरी हटाउनुस् !